Fifandraisana ara-tsosialy | Reef Resilience
Ny fikojakojana ara-tsosialy dia voafaritra ho fahaiza-miaina amin'ny fiaraha-monin'ny olombelona mba hiatrehana sy hampifanaraka amin'ny fanerena tahaka ny fiovan'ny fiaraha-monina, politika, tontolo iainana na ny toekarena. ref Satria ny olona dia afaka miomana sy miomana amin'ny toetry ny hoavy, mila miara-miasa amin'ny fiarahamonina miankina amin'ny harena ny mpiana hahatakatra ny fahasitranany amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary hanohanana ny ezaka fampifanarahana. Ny olona salama sy miroborobo dia manana safidy maromaro azo omena azy ireo, ary noho izany, dia afaka manampy amin'ny fiarovana ny asany izy ireo fa manohana azy, fa tsy manimba ny tontolo iainana ara-tontolo iainana. Ny fandaharan'asa fitantanana izay manome lanja ny faharetan'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka dia mety hahazo tombontsoa bebe kokoa amin'ny fanohanana ara-piarahamonina matanjaka kokoa, ny vidim-panafana entana ary ny fanaraha-maso bebe kokoa Raha fehezina, ireo mpitantana ny vatohara ho an'ny vatohara izay mamatsy vola amin'ny fanohanana ny faharetan'ny fiarahamonina pifidianana dia azo inoana kokoa ny hahatratrarana ny tanjon'izy ireo amin'ny tanjona maharitra. ref
Fahatanjahana ara-tsosialy ao amin'ny faritra voaaro an-dranomasina eto Madagasikara (MPAs)
Amin'ny fampiasana ny angon-drakitra ara-tsosialy momba ny ekonomika, Cinner et al. (2009) dia nanadihady ny fiantraikany ara-tsosialy eo amin'ny sehatry ny rafitra sosialy-ekolojika ao amin'ny MPA izay nahitàna vondrom-piarahamonina maromaro. Izy ireo dia nanangona fampahalalana amin'ny fampiasana fanadihadiana an-trano sy fanadihadiana miaraka amin'ireo informatika manan-danja sy ireo mpitarika eo amin'ny fiarahamonina Betsaka ny endriky ny fahasamihafana ara-tsosialy eto an-toerana ao amin'ny MPA an'ny Madagasikara. Ny fahasamihafana eo amin'ny tetik'ady roa sy ny rafitra ara-dalàna mifehy ny harena an-dranomasina amin'ny endriky ny taboosin'ny habaka dia nahitana ny fahafaha-manatsara ny fitantanana ny harena an-dranomasina. Ny fampandraisana anjara ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina sy ny fanapaha-kevitra dia avo dia avo amin'ny firenena hafa ao amin'ny faritra.
Mpanarato malagasy, Andavadoaka. Sary: Ida Vincent
Ny fahalemena marobe amin'ny fandaminana sosialy, raha adiresy, dia afaka manampy amin'ny fampivoarana ny rafitra ara-tsosialy sy ara-tontolo iainan'ny toerana ho amin'ny fananganana faniriana tsara indrindra. Samy tsy nanana vola ny ankohonana roa sy ny fokonolona. Ny fanehoan-kevitra ratsy momba ny siantifika siantifika ho an'ny fiarahamonina dia singa manan-danja izay mahatonga ny fahatokisana ambany eo amin'ny mpiasa sy ny fiarahamonina. Ny halakin'ny fanabeazana ara-dalàna dia manakana ny fankatoavana ireo rafitra izay mahakasika ny loharano an-dranomasina sy ny fomba fijerin'ny fomba hanatsarana ny toe-javatra iainan'ireo loharano ireo. Nisy ihany koa ny fifandraisana mahantra teo amin'ny andrim-panjakana sy lehibe.
Understanding Vulnerability and Resilience Social
Ny faharefoana ara-tsosialy sy ny faharetana dia foto-kevitra mifandraika izay manan-danja amin'ny fitantanana ny haran-dranomasina. Ny marefo ara-tsosialy dia refy fahaizana mahazaka ny fikorontanana sy ny adin-tsaina amin'ny fivelomana na fiainana. Ny fahalemena dia matetika no heverina fa misy singa telo: ny fahitana, ny fahatsapana ary ny fahaizany mampifanaraka. ref Ny fijery sy ny fahatsapana dia mamaritra ny fiantraikany mety hitranga eo amin'ny rafitra iray, raha ny fahafaha-manaiky no ahafahana manatsara ny fiantraikany mety hitranga amin'ny famaritana ny vulnerability. Ny faharetana dia azo asongadina ho vondrona mora vaky ref izay mamaritra ny fomba fandehan'ny rafitra amin'ny fiatrehana ny fiovana. Amin'ny teny hafa, ny faharetana dia fitambaran'ny fahatsapana sy ny fahaiza-manaony. Matetika ny faharetana sy ny vulnerabilité dia heverina ho mifanohitra amin'ny tsirairay, ary mitoetra ho marina izany amin'ny toe-javatra iainana manokana. Na izany aza, ny faharetana dia tsara indrindra hita amin'ny endriky ny rafitra izay mamaritra ny fahafahany miatrika ny fitaintainana, ary ny vulnerability dia ny vokatra ho an'ny rafitra manana faharetana manokana raha toa ka iharan'ny fisiana manokana izany.
Ny vondrom-piarahamonina sy indostrialy miankina amin'ny haran-dranomasina dia voakasik'ireo fiovana eo amin'ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina. Ny karazana sy ny habetsaky ny fanovana dia mitovitovy amin'ny habaka sy ny fotoana, izay midika fa samy hafa ny fiarahamonina sy sekta samihafa amin'ny fiovan'ny tontolo iainana. Ny habetsahan'ny fanandramana dia mamaritra ny habetsaky ny faharetana takiana mba hahazoana ny fampihenana ny vulnerability. Ireo mpikarakara ny haran-dranomasina sy mpikaroka dia loharanom-baovao manan-danja momba ireo fiovana miovaova ho an'ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina, ary mety ho mpandray anjara manan-danja amin'ny ezaka hanombanana ny fahavoazana. Ho an'ireo mpanarato, ny fakana an-keriny dia mety haka endrika fihenan'ny karazam-borona manjavozavo, raha toa ka mety hampihena ny fiheverana ny vatohara ho an'ny toeram-piasana lehibe ho an'ny toeram-piasana ny fizahan-tany.
Fahasamihafana amin'ny fiovana
Ny vondrom-piarahamonina sy ny olona izay miankina bebe kokoa amin'ny entana sy ny serivisy ateraky ny vatohara dia mahatsapa kokoa ny fiovan'ny toe-piainana eo amin'ny tontolo iainana. Ny fahatakarana ny fiankinan-doha dia mampiseho ny fahatsapana ny rafitra sosialy, izay, raha ampifandraisina amin'ny fahalalàna ny fisehoana (izany hoe, fiovan'ny toetr'andro / fahafahana miseho), dia afaka manampy ireo mpitantana hamantatra ny mety ho fiantraikany. Ny olona dia mety miankina amin'ny haran-dranomasina noho ny fiarahamonina (ohatra ny toerana, ny fifehezana ny asany, ny toe-javatra iainan'ny fianakaviana, ny fahafaha-miasa ary ny habeny sy ny kalitaon'ny tambajotra), ny toekarena (ohatra, fidiram-bola, , specialization, soatoavina, fihetsika, fahatsapana ary fahatakarana ny fandrahonana).
Ny fiantraikany mety dia mamaritra ny fahalemen'ny rafitra iray raha tsy misy ny fanovana. Ohatra, mety hisy fiantraikany ara-toekarena ny mety ho fiantraikan'ny fitrandrahana amin'ny alàlan'ny fanjavonan'ny karazana lasibatra raha toa ny orinasa tsy miova.
Ny fahaizan'ny adaptive dia mifandray amin'ny fahafahan'ny olona hivadika loharanom-bola (anisan'izany ny ara-bola, ara-boajanahary, ny maha-olona, ​​ara-tsosialy na ara-batana) mba hampifanaraka amin'ny toe-javatra iainan'ny olona iray noho ny fahatsapan'izy ireo ny fanovana (izany hoe ny fiankinan'ny loharanon-kery). Ho an'ireo mpanarato dia mety handika izany amin'ny fahafahany mampiasa vola amin'ny fitaovam-pitaterana hafa, mahazo fahaiza-manao vaovao amin'ny alàlan'ny fianarana, ary miara-miasa mba hampivoarana ny famolavolana findramam-bola sy hampitomboana ny vokatra azo avy amin'ny fitrandrahana amin'ny fanonerana ny tahan'ny lozam-pifamoivoizana. Ny toetra manan-danja mifandraika amin'ny fahaizan'ny adaptation dia: ref
Ny fahafahana mitantana loza sy tsy fahazoana antoka
Manana fahaiza-manao ho an'ny tetikady, manomana, manandrana, mianatra ary manavao
Buffers ho an'ny fanovana fiovana
Zava-dehibe amin'ny fiovana
Ireo mpiorina amin'ny marefo ara-tsosialy sy ny ohatra amin'ny toetra izay mety hisy fiantraikany amin'ny fiakarana, ny fahatsapana ary ny fahaiza-manao mifanaraka amin'ny rafitra sosialy miankina amin'ny vatohara. Loharano: nalaina avy tamin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWongbusarakum sy Loper 2011manokatra fisie PDF